Sazi iinkcukacha ezithe kratya malunga nokusonga okulandelayo okusuka kwi-Samsung | I-Androidsis
Le yindlela echazwa ngayo iselfowuni yokusonga ye-Samsung
Isamsung iphezulu kuyo yonke into kwaye besibonisa ezinye zezinto ezintsha kwizixhobo zenkampani yaseKorea kwiintsuku ezimbalwa. Ngoku siyazazi ezinye iinkcukacha ze iya kuba njani iselfowuni yokusonga i-Samsung.
Inkampani yaseKorea kuya kufuneka tshintsha ukusebenzisana namava akho e-Samsung yeselfowuni eya kuba nezikrini ezibini ezinokuthi ziguqulwe zibe yithebhulethi okanye iselfowuni njengoko kufanelekile kuthi.
Ukuya kuthi ga ngoku esinokukuxelela namhlanje, iSamsung iya kuba ukusebenza ngeeprototypes ezimbini ezahlukeneyo kwiselfowuni esongwayo. Inye iya kuphawulwa ngemilo ethe nkqo xa isongelwe ngokupheleleyo, ngelixa enye prototype iya kuba tye. Ukubheja ezimbini ezahlukeneyo ngenye indlela yokuqonda amava anokunikezelwa yi-smartphone.
Ukuba besithetha nge-brand yaseKorea edibanisa Ngaphantsi kwescreen sensor yeminwe kwiGPS S10 elandelayo, njengaye obu bunye ubuchwepheshe o iinkumbulo ezintsha, yakho isiphelo esiphezulu se-2019 kunye ne-2020, Asinakuthetha ngokufanayo apha, kuba le mobile iyakwenza ngaphandle kwenzwa eskrinini.
Iselfowuni esongekayo yeselfowuni ingavula njengeeselfowuni ezindala, nangona oomatshini babenokuhlengahlengiswa ngakumbi kunamhlanje ukuze babe "banamhlanje" kwaye "bapholile". Olunye lweempawu esizaziyo bubunzima bayo, ine-200 gram, ke iyibeka ecaleni kwezo Smartphones zinezikrini ezinkulu; Uhlobo lweGalaxy Note 9 okanye i-iPhone XR esandula ukwenziwa.
Siyayazi kwakhona i-celona nani liphezulu lokuphindaphinda Oko kunokwenziwa ngendlela yokuvula, malunga ne-200.000 ngaphandle kokonakalisa iselfowuni. Okwangoku asazi ukuba izakuba sekupheleni kwalo nyaka okanye ekuqaleni konyaka ozayo xa iSamsung ekugqibeleni ithathe isigqibo sokumilisela le fowuni yokusonga enabaninzi abafuna ukwazi ukuba izakuba njani.
Siza kubona indlela i-Samsung ebazisa ngayo neselfowuni esongwayo kwaye lonto iyakuthatha ihlombe eluntwini ngeenyawo; Ngokukodwa ngophawu lwaseKorea oluthi xa selufikile, lwazi ukwenza izinto kakuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Le yindlela echazwa ngayo iselfowuni yokusonga ye-Samsung
Uyicoca njani imbali yakho yokukhangela kwiGoogle Chrome ye-Android
Khuphela imifanekiso yamaphephadonga eRazer Ifowuni 2 entsha